उज्जल थापालाई मिश्रको प्रेमपत्रः ‘हामीले एकअर्कालाई नचिनेरै प्रेमविवाह गर्यौँ’ – Everest Dainik – News from Nepal
उज्जल थापालाई मिश्रको प्रेमपत्रः ‘हामीले एकअर्कालाई नचिनेरै प्रेमविवाह गर्यौँ’
२०७५, २८ पुष शनिबार
काठमाडौं । हामीबीच राजनीतिक प्रेम विवाह भएको थियो। तर हामीले अरूले गरिदिएको बखानको भरमा प्रभावित भएर एक/अर्कालाई राम्ररी नचिनिकनै विवाह गरेछौं। विवाह लामो समय टिक्न सकेन। तर यो बीचमा हामीले एकअर्काबाट धेरै सिक्यौं।
अब एकपल्ट भेटेर प्रेम र भ्रमका कुरा गर्ने मन छ। लक्ष्य बोकेरमात्र नहुने रहेछ, लक्ष्यमा पुग्ने शैलि र चरित्रका बारे गफ गर्ने मन छ। जीवन धेरै बाँकी छ, यात्रा लामो छ। तर देश रूपान्तरणको गन्तव्य भने मैले बदलिँदो परिवेशका कारण झन, झन छोटो देख्न थालेको छु। त्यो नजिकै देखिन थालेको गन्तव्यलाई म विगार्ने पक्षमा छैन।
अब एकपल्ट भेटेर प्रेम र भ्रमका कुरा गर्ने मन छ। लक्ष्य बोकेरमात्र नहुने रहेछ, लक्ष्यमा पुग्ने शैलि र चरित्रका बारे गफ गर्ने मन छ। जीवन धेरै बाँकी छ, यात्रा लामो छ। तर देश रूपान्तरणको गन्तव्य भने मैले बदलिँदो परिवेशका कारण झन, झन छोटो देख्न थालेको छु। त्यो नजिकै देखिन थालेको गन्तव्यलाई म विगार्ने पक्षमा छैन। सिँगो देश बनाउन सानो मुटु लिएर हुन्न। देश बनाउन देशभन्दा ठूलो मुट चाहिन्छ। सँगसँगै इमानदारी, क्षमता, समूहमा काम गर्ने ढंग पनि चाहिन्छ। धेरै कुरा चाहिन्छ।
मन दुखाउनेहरु अझ धेरै छन्। हामी सबैलाई थाहा छ, हामीबीच अभियानकेन्द्रीत समूह मात्र बन्ने की राष्ट्रिय राजनीतिमा सुसंस्कृत नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेर देश रूपान्तरण गर्ने पार्टी बनाउने भन्नेमा मतभेद थियो। त्यो मतभेद छलफलबाट टुङ्गिन नसकिने तहको थिएन। तर तपाईंहरू जानुभयो र गएदेखि नै आरोपै आरोप लगाउनुभयो।
छिटै बसेर चिया खाउँला। मिलेमा लामो समयदेखि जाने भनेर नगएको ओम आध्या रिसोर्ट जाउँला। के थाहा पुनर्मिलन भई पो हाल्छ कि। घाम भर्खर उदाएको अवस्था हो, बादल लाग्दैमा त्यसलाई अस्ताएको भन्न मिल्दैन। अन्यथा, हामीमा समयले लेराउने सुझबुझसँगै बाटो फेरी एकै ठाउँमा मिसिएछ भने सँगै यात्रा गरूँला। तपाईंहरूलाई नयाँ यात्राका लागि धेरैधेरै शुभकामना ! सबैको जय होस्, नेपालको जय होस् !
ट्याग्स: rabindra mishra, Ujwal Thapa
साफ यु–१८ च्याम्पियनसिपः पहिलो खेल माल्दिभ्सविरुद्ध खेल्दै नेपाली युवा टिम
यस्तो छ संविधान नमान्नेहरुको असहमति